Itoobiya oo ka hadashay sababta ay ciidamadeeda uga baxayaan Soomaaliya - BBC News Somali
26 Oktoobar 2016
Image caption Ciidamada Itoobiya qaar ka mid ah ayaanan hoos tagin AMISOM
Wasiirka warfaafinta ee Itoobiya, Getachew Reda, ayaa ka hadlay sababta ay ciidanka dalkiisa uga baxeen deegaanno ka tirsan koonfurta Soomaaliya.
"Joogitaankeena Soomaaliya ayaa ah laba nooc. Laba kun oo askari ayaa nagaga jira AMISOM". Ayuu yiri wasiirka warfaafinta Itoobiya.
Wuxuu intaasi ku daray, "Waxaa intaa dheer dhowr kun oo askarteena ah kuwaas oo caawinaya AMISOM iyo ciidanka dowladda Federaalka ah ee dagaalka kula jira Alshabab. Balse sida aan marar badan horay u sheegnayba, askarkeena ka tirsan AMISOM waxa ay Soomaaliya sii joogi doonaan inta ka dhiman muddada howlgalkooda, balse qasab ma ah in ay halkaa naga sii joogaan ciidanka kale ee aan AMISOM hoos tegin".
Image caption Alshabaab ayaa ka faa'ideysaneysa ka bixidda ciidamada Itoobiye ee deegaanada qaar
Image caption Ciidamada AMISOM ayaa Soomaaliya u jooga nabad ilaalin
"Saaka aroortii ayey ciidamada Itoobiya ka guureen Tiyeeglow", ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka oo intaasi ku daray "Alshabaab ayaa magaalada soo gashay oo hadda ku sugan".
Sagaal ciidamada AMISOM ayaa lagu xukumay xabsi ka dib markii lagu helay danbi in shidaal ay iibin jireen
16 Agoosto 2016
Muuqaal Daawo: Ciidammo ka socda AMISOM oo la geeyay Cadaado
Xaaladda degmada Afgooye oo deggan saaka
Shabaabka oo la wareegay Ceel Cali